Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zeHong Kong zokuHamba » Umnyhadala wewayini kunye neDine yaseHong Kong usondela kufikelela kwi-1 yezigidi
Umnyhadala wewayini kunye neDine yaseHong Kong usondela kufikelela kwi-1 yezigidi
Umnyhadala weWin Kong & Dine waseHong Kong ka-2020 ugqitywe ngokusesikweni izolo. Kwakuyixesha lokuqala iBhodi yezoKhenketho yaseHong Kong (HKTB) yamkela ifomathi "ekwi-intanethi + ngaphandle kweintanethi" kulo msitho, iqinisekisa ukuba uluntu lunokuthatha inxaxheba ngaphandle kokukhathazeka ngokuqhambuka kweCovid-19. Ngexesha leeveki ezintlanu zilandelelana, Umnyhadala ubunetafile epheleleyo yamava esisu kubaphulaphuli basekhaya nakwamanye amazwe.
I-Masterclass ekwi-Intanethi ibonwa phantse ama-850,000 amaXesha
I-Masterclass ye-Intanethi- "isithako" esitsha sonyaka weHong Kong yeWayini kunye neDine Festival - yaba yinkqubo yokuya ekhaya kubantu abaninzi ngexesha lokuqhambuka kweCovid-19. Iiklasi ezingama-34 zizonke zabanjwa ngaphezulu kweempelaveki ezintathu, zivelisa phantse i-850,000 yeembono. Malunga ne-30% yababukeli bevela kwiimarike ezimfutshane nezinde, ezifana ne-India, iTaiwan, i-UK, i-France, i-US kunye ne-Canada.
Ezona klasifisi zaziwa kakhulu kwi-Intanethi zibandakanya i "Ah Yat irayisi eqhotsiweyo" imiboniso yokupheka yi-Executive Chef ye-Executive Chef Adam Wong; iklasi yobhiya kunye negcisa lokudibanisa itshizi ngu-Master Master Brewery kunye noMonsieur CHATTÉ; kunye no “Art of Blending: When Johnnie Walker Meets Coffee” ngu-mixologist okumgangatho wehlabathi u-Antonio Lai kunye no-barista wekhofi oqeqeshiweyo u-Timmy Lam.
Nangona zonke iiMasterclass ezikwi-Intanethi ziphelile, iividiyo ezigcweleyo ziyafumaneka ukujonga kwiwebhusayithi yomsitho https://winedinefestival.discoverhongkong.com.
Ukuthabatha / iiMenyu zokuHanjiswa kunye neeNdawo zokutya zidibene neempendulo ezilungileyo
Umnyhadala walo nyaka weHong Kong yeWayini kunye neDine uqhubekile ukuzisa amathuba kubathengisi bewayini nakwicandelo lokutyela ukukhuthaza iimveliso kunye namashishini abo. Umzekelo, i-HKTB ibambisene neehotele eziphambili kunye neeresityu ezidumileyo ukubonisa iimenyu ezingama-30 zokuhambisa okanye zokuthatha, uninzi lwazo bezikhethekile kuMnyhadala, kubandakanya iti yasemva kwemini ekhethekileyo eyenzelwe nguGrand Hyatt Hong Kong. UMlawuli wezoNxibelelwano lweNtengiso wehotele, U-Eva Eva Kwok uthe, Nangona abantu baseHong Kong besitya ukutya okuncinci kwezi ntsuku, basatsalwa kukutya okumnandi. ”
I-HKTB ibambisene namaqonga okutyela kunye nemibutho ukukhupha izibonelelo kwiindawo zokutyela ezingaphezu kwama-500 ukukhuthaza uqoqosho lwasekhaya, kukhokelela ekubhukweni okungaphezulu kwama-10,000 ngexesha apho i-Covid-19 yayilawulwa. "Ngokusebenzisa iqonga lokwazisa le-HKTB, uninzi lweendawo zethu zokutyela ezithathe inxaxheba ziphumelele ngakumbi kunoko bekulindelwe kwaye zafikelela kumacandelo amatsha abathengi," utshilo uMnu. Ryan So, uMlawuli woPhuhliso lweShishini iGreater Bay Area kunye neHong Kong yeSixeko sokutyela, elinye lamaqonga amaqabane oMnyhadala .
Ukuqhubeka kokuPhakanyiswa kweHong Kong kwiiNtengiso zeNdwendwe
I-HKTB yenze unyuselo kwiimarike zemithombo yeendwendwe kugxilwe ekuphuculeni umfanekiso waseHong Kong njengenkunzi yezemali. Iququzelele uthotho lwemisebenzi yewayini-kunye-yokutya kwi-Intanethi malunga ne-100 yeentatheli ezivela kwiimarike ezinde kunye nezifutshane, ezinje ngokujonga kwangaphambili kwi-Online Masterclass, inkcubeko yokutyela ekhokelwa kukhenketho, nodliwanondlebe kunye nonxibelelwano neHong eyaziwayo Abapheki baseKong kunye nabagxeki bewayini. Nangona imithombo yeendaba yamanye amazwe ibingenakuba seHong Kong ngokwasemzimbeni, bebekwazi ukufunda ngenkcubeko yokutya kwesi sixeko kwaye bafumane iindaba zamva nje malunga nendawo yokutya.
Umpheki odumileyo waseHong Kong uChristian Yang ukhokele ukhenketho lokutya ekwi-Intanethi ukukhuthaza inkcubeko yokutyela yaseHong Kong kwimidiya yaphesheya.